देश/ विदेशको समाचारः एचकेनेपाल डट कम » सामुदायिक भवनका लागि च्यारीटी
सामुदायिक भवनका लागि च्यारीटी
लण्डन, १४ नोभेम्बर । साउथइष्ट लण्डन क्षेत्रमा नेपालीहरुको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि तमुधी प्लमस्टिड क्षेत्रीय समितिले आइतबार च्यारीटी डिनर गर्‍यो । हाउजिङ कमिटी मातहतमा प्लमस्टिडस्थित सेन्टप्याट्रीक हलमा भएको च्यारीटी कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका मानिसहरुको सहभागिता रहेको थियो। Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
हाउजिङ कमिटिका अध्यक्ष श्रीचन्द्र गुरुङले ‘हाउजिङ प्रोजेक्ट’का बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले तमु समाजले निर्माण गर्न लागेको सामुदायिक भवन बौद्ध तथा हिन्दु धर्मका मानिसहका लागि फलदायी हुने विश्वास लिए। भवनको एउटा कोठामा बौद्ध र अर्कामा हिन्दूको मन्दिर राखिने बताउंदै गुरुङले भवन साउथइष्ट क्षेत्रका बृद्ध बाबाआमाहरुका लागि मनोरञ्जनस्थल समेत हुने बताए। भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म करीब छयासठ्ठी हजार पाउण्ड रकम संकलन भइसकेको छ।
च्यारिटी कार्यक्रममा पनि सहभागी चन्दादाताहरुले आर्थिक सहयोग गरेका थिए। त्यसैबीच, स्थानीय समाजसेवी विजय गुरुङले भवन निर्माणका लागि एक हजार पांच सय पाउण्ड आर्थिक सहयोग गरे।
कार्यक्रममा प्लमस्टिड तमु समाजका अध्यक्ष्य रिटायर्ड क्याप्टेन नारायण प्रसाद गुरुङले सामुदायिक भवन सबै जात र धर्मका लागि भएकोले सबैबाट सहयोगको अपेक्षा गरीएको बताए।
साउथइष्ट लण्डन बौद्ध आमा समाजकी अध्यक्ष रामकुमारी गुरुङले सबै दानबीरहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्। सूर्य गुरुङद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा सुमल कुमार गुरुङले उपस्थित पाहुना तथा तमु समाजका सदस्यहरुलाई स्वागत गरेका थिए।
दोश्रो चरणमा स्थानीय कलाकारबाट सांस्कृतिक मनोरञ्जन गराइएको थियो। स्थानीय कलाकार भावना गुरुङले ‘दिल यो मेरो दिल’ गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन। सांस्कृतिक कार्यक्रम योगेश गुरुङले सञ्चालन गरका थिए।
कार्यक्रमामा एन आर एन उपाध्यक्ष महेन्द्र कंडेल, नेपाल फोरम ग्रिनवीचका अध्यक्ष डा. राम अधिकारी, नेपाली टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गुरुङ, गुल्मी जिल्ला समाजका प्रतिनिधिहरु, थकाली सेवा समाजका श्याम शेरचन लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
Most Popular in November, 2011
कल्पना तमु मिस तमु २०११ घोषित
उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व समापन
सडन डेथमा गोर्खालाई उपाधि
मौसमीको "महसुस" सार्वजनिक
मिस तमुस्योको ताज पुष्पलाई
अफगानिस्तानमा मारिएका विजयको अन्तिम संस्कार
सुब्रतो कपको उपाधि नेपाललाई
माछामारा डाडाँमा गोर्खा स्मृति पार्क
मिस तमुस्योको प्रशिक्षण सुरु, मिस मगर मंसिरमा
भेडेटारमा पर्यटकहरुलाई मनोरञ्जन